Wadada u dhaxeeysa B/weyne iyo Ceel-jaalle oo la xiray – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Wadada u dhaxeeysa B/weyne iyo Ceel-jaalle oo la xiray
Wararka naga soo gaaraya gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ay gebi ahaan xireen wadada u dhaxeeysa magaalada B/weyne iyo deegaanka loo barakacay ee Ceel-jaalle.
Wadadaasi ayaa la xiray kadib markii isku socodka wadadaasi ay noqotay mid halis ah, islamarkaana ay dhowr qof biyaha qaadeen, kuwaas oo ay markii dambe soo badbaadiyeen ciidamada dowladda Soomaaliya.
Qaar ka mid ah saraakiisha ciidamada dowladda Soomaaliya oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in wadadaasi ay xirnaan doonto illaa laga keeno qorsho lagu bad-baadinayo dadka shacabka ah, oo ay biyaha qaadayaan xilli ay ku wajahan yihiin deegaanka Ceel-jaalle oo dhinaca bari kaga beegan magaalada B/weyne.
Maalmihii ugu dambeysay boqolaal qoys oo ka barakacay fatahaada uu Wabiga Shabeelle ka geystay magaalada B/weyne ayaa haatan ku sugan deegaanka Ceel-Jaale.
Dad badan oo weli ku sugan magaalada B/weyne ayaa qorsheynayay inay u barakacaan deegaanka Ceel-jaalle, balse ay haatan u muuqato mid ay ciidamada joojiyeen isku socodka dadka ee magaaladaasi iyo deegaanka Ceel-jaalle.
Dhinaca kale, mas’uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Hiiraan ayaa horay ugu amray ciidamada dowladda inay tagaan deegaanka Ceel-jaalle, islamarkaana ay sugaan amniga dadka fatahaada ka barakacay ee ku sugan deegaankaas.
Si kastaba ha ahaatee, waxaa magaalada B/weyne haatan ka socda dadaalo xoogan oo lagu xakamaynayo biyaha wabiga Shabelle, ee burburka baaxadda leh ka geysanayo magaaladaas.